Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Uruguayan Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'Fede". Sheekadeena Carruurnimo ee Federico Valverde iyo Xaqiiqooyinka Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Kicitaanka Federico Valverde. Dhibcaha Sawirka: Elobserver iyo DailyMail
Haa, qof walba waa ogyahay inuu yahay a qadka dhexe ee karti leh, halyeeyga aan ku guuleysan kaliya qalbiyada taageerayaasha Real Madrid. Si kastaba ha noqotee, kaliya tiro yar oo taageerayaal ah ayaa tixgeliya qaabkeenna Federico Valverde's Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
Federico Santiago Valverde Dipetta wuxuu ku dhashay maalintii 22nd ee Juulaay 1998 aabihiis, Julio Valverde iyo hooyadiis Doris Valverde oo ku taal magaalada weyn ee Montevideo, Uruguay. Fede, sida loogu yaqaan badanaa, wuxuu u dhashay cunugga labaad ee waalidkiis jecel oo sawirkan hoose ku sawiran.
La kulan Federico Valverde Waalidiinta - Aabihiis, Julio iyo Hooyo, Doris. Sumcada Sawirka: ovaciondigital
Federico wuxuu ka soo jeedaa qoys dabaqadda dhexe ah iyo diin ahaan, waxaa soo korsaday waaliddiinta masiixiyiinta ah ee caqiidada Roman Katooliga ah. Sida oo kale Diego Forlán, Kubbad sameeyuhu wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa Magaalada caasimada Uruguayan ee Montevideo. Xaqiiqda ayaa ah in magaalo-madaxda Uruguay (Montevideo) mar ay ahaan jirtay Boqortooyadii Isbaanishka ee hore (1724-1807), waxaan tilmaam karnaa in Federico yeelan karo xididdada Isbaanishka Isbaanishka.
Federico Valverde wuxuu leeyahay Asalkiisa Qoyska magaalada Montevideo. Heerarka: theculturetrip iyo elobservador
Federico Valverde kuma uusan kicin keligiis waalidkiisa, laakiin sidoo kale waxaa ka garab muuqday walaalkiis ka weyn oo ku magac dheer Diego. Waxay ahayd qoys aan markii hore waxba ka aqoon kubbadda cagta, oo aan lahayn xubno qoys ama qaraabo ah oo ku lug leh. Ciyaarta waxay ku bilaabatay nafsadeena gaarka ah Federico Valverde intii uu xirnaa xafaayadda.
Sida carruurta ugu dambeeya, Frederico wuxuu ahaa nooca carruurta wax weydiisan kara waxna arki kara isagoo ku qabanaya daboolka faraha. Xilligaas, isagu waligiis ma weydiisan alaabta carruurtu ku ciyaaraan, laakiin keliya kubad. Markii uu ahaa cunug (da 'ahaan u jiray 2), Federico wuxuu aabihiis u yeeray bartilmaameed bartilmaameed qolka fadhiga ee qoyskiisa. Maalinba maalinta ka dambaysa, wuxuu kubad kubad ku tuuri lahaa shabaqyada saacado, isagoo dhalinaya goolal sharaf leh. Wax yar ayuu qof walba ogaa markii hore inay calaamad u tahay mustaqbalkiisa.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Markii uu jiray da'da 3, Fede wuxuu ku jiray isaga damac guban oo ah inuu ku biiro koox kubbadda cagta ah oo doonaysa waxbarashada isboorti. Intii uu weli xidhnaa xafaayadda, waalidkiis waxay ku guuleysteen inuu iska diiwaan geliyo Ilmaha midowga ardayda, akadeemiyad yar oo ku taal magaalada Montevideo. In kasta oo looma ogolaan inuu ciyaaro ciyaaro rasmi ah maxaa yeelay isagu ma uusan gaadhin illaa da'da 6.
Markii uu jiray da'da saddex, ciyaar aan rasmi ahayn, Fede wuxuu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ciyaar aan rasmi ahayn oo ka dhan ah akadeemiyad kale oo la yiraahdo Danube. Ma ogeyd?… Dabaaldegii, ciyaariyahankii yaraa wuxuu ka qaaday xafaayadiisa inuu la yaabay taageerayaasha. Magdhowga maqnaanshaha cayaaraha rasmiga ah, Federico yar ayaa mararka qaar loo diraa sidii masar oo uu ugala wareego kooxaha waa weyn.
Little Federico Valverde waxaa loo adeegsaday Mascot maalmihii hore. Astaanta Muuqaalka: Instagram
In yar, Federico wuu koray oo wakhtigiisu wuxuu ahaa 5, akadeemiyadda akriimadooda waxay go aansatay inay isaga siiso fursad uu kaga ciyaaro jaangooyooyinka akadeemiga ee loogu talagalay da 'da' 6-sano jir iyo wixii ka sareeya.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Nolosha Mudnaanta Hore
Fahmitaanka rabitaanka wiilkooda ee kubbadda cagta wuxuu arkay waalidiinta Federico Valverde inay sameynayaan wax kasta oo ay ku taageeri karaan himilooyinkiisa. Waqtigii uu ku soo biiray, ma jirin kabo kubadeed oo aad ugu yar lugaha yar yar. Federico Valverde hooyadeed waxay ahayd inay soo booqato dukaamo badan, dhamaadka, ayagoo raadinaya kuwa loo adeegsaday carwada.
Nasiib wanaagse, dadaallada waxay bilaabeen inay ku bixiyaan lacag bixinta dhowrkii bilood ee ugu horreeyay ee kubbadda cagta (kahor dhalashadiisa 6th). Ma ogeyd?… Federico Valverde wuxuu ka caawiyay kooxdiisu inay hanato koobkeedii ugu horreeyay ee Championship sanadka 2003 isagoo weli da 'ahaan ku jira 5.
Federico Valverde Sannadaha Hore ee Kubadda Cagta - Koobkiisii ​​ugu horreeyay. Sumcada Sawirka: Elobserver
Wuxuu ka walwalay ciyaartoy da 'weyn oo isaga ka sii hooseeya una sii guuleysan doona horyaalnimadiisii ​​ugu horreysay markay ahayd da'da jilicsan ee 5 waxay kordhisay fursadiisa ah inuu galo tacliinta waaween.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Waddada loogu talagalay sheekada
Sannadkii 2008, farxadda reer Valverde waxay ogaatay inaysan jirin wax xaddidan markii Federico yar loogu yeeray inuu xaadiro tijaabada Penarol, oo ah naadi kale oo reer Uruguay ah oo ka socda Montevideo. Wuxuu raacay hooyadiis si uu u tijaabiyo.
Ka dib markii uu u soo dhowaaday carruurtii kulannada la isugu imaanayay, wiilka xishoodka ku tiirsan geed geed kama uusan dhaqaaqin. Mid ka mid ah howl wadeenada tababarayaasha ee dooranaya ciyaartooy la tijaabinayo oo magaciisu yahay Néstor Gonçalves ayaa u dhawaaday Federico isagoo leh; “Hey wiil! Maxaad ugu imaan weyday inaad ciyaareyso? Ciyaar!". Federico (oo sagaal jir ah) ayaa isla markiiba ka jawaab celiyay codkii awoodda lahaa. Wuxuu si dhakhso leh ugu orday inuu ku biiro carruurta kale si uu isagu isu baadho.
Doris, hooyadiis waxay daawatay howsha waxayna maqli kartaa tababbaraha oo leh wiilkeeda waa cunug dhif ah oo runtii la aqbali doono. Markay taas maqashay, hooyadii kibirsanayd ayaa u tagtay Néstor Gonçalves iyadoo leh; 'Fede oo aad ka hadashay waa wiilkayga'. Markiiba, tababaruhu wuxuu uga mahadceliyay Dorin inuu si wanaagsan kor ugu qaaday. Kadib tijaabadii lagu guuleystey, Federico sawirka hoose wuxuu ka qoran yahay Rol arol.
Sawirka Federico Valverde ka dib tijaabo guul leh oo laga qaaday Peñarol. Sumcada Sawirka: Elobserver
Ku biirista Peñarol waxay ka caawisay inuu si dhakhso leh u horumariyo, isaga oo siiyay aqoonsi heer qaran ah sannadihii uu yaraa. Gudaha laba sano oo ay ku soo biireen iyaga, xiddigii kor u kacay ayaa wacay kooxdii dhalinyarada ahayd ee U15 ee xulka qaranka Uruguay.
Xilligii 2015 – 2016 inta uu wali ku jiray dugsiga akadeemiyada Peñarol, Fede wuxuu la kulmay geesigiisa Diego Forlan oo ku soo biiray kooxda heerka sare ee 10th of July 2015. Halyeeyga reer Uruguayan ee ku soo dhowaaday hawlgabnimada ayaa u adeegay aabihiis isaga u ah.
La kulan Federico Valverde's Idol- Diego Forlán. Halkan, waxay u muuqataa inay hadda ku soo gabagabeeyeen kulan hagitaan ah. Astaanta Sawirka: Marca
Diego Forlán wuxuu kula taliyay Fede inta ugu badan mustaqbalkiisa ciyaareed, isagoo u sheegay inuu si adag u shaqeeyo oo is-hoosaysiin. Si dhakhso ah, Federico kor u kaca ah ayaa ka qalin jabiyay akadeemiyada wuxuuna ku biiray sanamkiisii ​​kooxda sarsare ee kooxda. Maareynta kaliya ma aysan siinin guusha Federico Valverde. Waxay ahayd guul laga soo saaray isaga asaga, oo uu weheliyo sanamkiisii ​​(Diego Forlan) oo la sumeeyay lagana caawiyay Peñarol inay sugto koobka Primera División 2015 – 16.
Federico Valverde oo ay weheliyaan macalinkiisa iyo sanamkiisa ayaa Pe guidedarol ku hogaamiyay cinwaanka 2015-16 Primera División. Sumcada Sawirka: Instagram, Bolavip.
Waqtigii Federico wuxuu ahaa 17, sanamkiisii ​​(Forlan) uga tegey koox kale, horumarin ka dhigtay inuu miyir qabo. Si kastaba ha noqotee, inuu ku guuleysto shaqsi ahaan Premier League wuxuu u arkay inuu kormeerayo kooxo badan oo yurub ah. Real Madrid ayaa si guul leh ku xaqiijisay saxiixiisa. Naadigu wuxuu u oggolaaday inuu ka ciyaaro kooxdooda da 'yarta (Real Madrid B) halkaas oo loogu diriray boos ka mid ah kooxda sare ee tartanka.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Kusoo caan bax
Intii uu joogay Real Madrid B, Federico waxaa loogu yeeray inuu dalkiisa matalo Koobka Adduunka ee FIFA U-20. Safarka Uruguay ee tartanka waxaa si fiican u qeexay difaac adag iyo khad dhexe oo cajaa'ib leh oo uu hogaaminayo cid kale oo aan ahayn Federico Valverde.
Tartanka kadib, Valverde wuxuu usocday inuu ku guuleysto koobka 'Ball Ball'. Sawirka hoose waa isaga oo garab socda Dominic Solanke iyo Yangel Herrera- ku guuleystayaasha Adidas Dahabka iyo Dahabka siday u kala horreeyaan.
Federico Valverde wuxuu ku guuleystay Adidas Silver Ball FIFA-U-20 World Cup 2017. Sumcada Sawirka: FIFA
Halkii uu ku burburin lahaa koobka ka dib, ciyaaryahanka qadka dhexe wuxuu ka socday xoog iyo xoog, isagoo ku sii jeeday kooxda waa weyn ee Real Madrid. Si uu runti ugula tartamo booska qadka dhexe ee Real Madrid, wuxuu go’aansaday inuu waayo aragnimo ka helo meel kale, isagoo u qaatay xulashada amaahda Deportivo La Coruña, oo ah koox ku kaliftay inuu weynaado.
Mid ka mid ah kulamadii Deportivo ee ay la ciyaareen kooxda FC Barcelona, ​​Fede si fiican ayuu u ciyaaray, waana natiijo laga helay Luis Suarez orda qolka labiska ee La Coruña si ay u salaamaan uguna xidhaan funaanadiisa.
Ka soo noqo amaahda: Markii uu ka soo laabtay amaahda, Valverde wuxuu bilaabay inuu soo jiito macallinkiisa cusub ee Julen Lopetegui intii lagu jiray xilligii 2018 / 2019. Qaab ciyaareedkiisa waxa uu arkay inuu dib ugu laaban doono kooxda koowaad ee Real Madrid. Kadib Lopetegui, maamulaha xiga Santiago Solari sidoo kale waxay soo jiidatay muhiimada koboca Valverde iyo laqabsashada kooxda. Si dhakhso leh waqtiga qoraalka, Federico si fiican ayuu ula qabsaday Real Madrid, isagoo horumar ka samaynaya boodhadh iyo xuduudo inta lagu gudajiray 2019 2020.
Federico Valverde ayaa haatan noqday mid sarre oo awood leh doorkiisa khadka dhexe ee Madrid. Amaah: 90Min
Haa !, anaga oo ah taageerayaasha kubada cagta waxaan qarka u saaran nahay inaan aragno xiddig kor u kacaya oo u ifinaya mustaqbal wanaagsan oo khadka dhexe ka ciyaara oo indhahayaga ku horreeya. Federico Valverde Xaqiiqdi waa mid ka mid ah soosaarida aan dhamaadka laheyn ee khadka dhexe ee cajiibka ah ee kubada cagta adduunka. Kaliya diyaar uma ahan inuu garbaha ku xoqo Luka Modric iyo Toni Kroos laakiin tartan culus si ay u baabi'iyaan qof kasta oo kuwan waaweyn. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Nolosha Xiriirka
Ciyaartoy kasta oo ku guuleysta kubada cagta, waxaa had iyo jeer jira WAG suura gal ah oo indhaha ka duuban kara oo rajeynaya in booskiisa uu ka dhigo sidii gabar saaxiibo ah. Xaaladda Fede, runti waxaa jirtay marwo qurxoon oo magac ku yeelata; Mina Bonino. Waxay (sawirka hoose) wuxuu saaxiibtiis noqday ka dib markii Federico uu ka tagay saaxiibtiis hore oo la yiraahdo Juliet.
La kulan gabadha Federico Valverde gabadha- Mina Bonino. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Isku darka quruxda iyo maskaxda ayaa aad ugu badan gabdhaha saaxiibbada la ah ee kubbadda cagta. Federico taasi waa ka reeban tahay maaddaama saaxiibtiis ay tahay soo-bandhig TV iyo suxufi guul leh. Mina Bonino waxay ku dhalatay maalinta loo yaqaan '14th of October 1993' taasoo la micno ah inay tahay 5 sano kana weyn wiilkeeda caanka ah. Ayaa runtii danaynaya… ... Ka dib oo dhan, da'da, sida ay yiraahdaan, waa tiro uun.
Mina Bonino waxay ku raaxeysataa faneed aad u weyn Instagram-ka iyada oo inka badan 250k la raacday boggeeda Instagram (waqtiga qoraalka). The quruxda quruxda badan waxay siisaa kalsoonida ay weheliyaan ninkeeda mid kasta oo ka mid ah dabinkooda. Sida hoos ku xusan, labaduba waxay ku raaxeystaan ​​xiriir caafimaad leh oo ku saleysan kaliya saaxiibtinimada.
Federico Valverde iyo saaxiibtiis waxay ku raaxeystaan ​​xiriir adag oo ku saleysan saaxiibtinimo. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Waxay ogaataa farqiga u dhexeeya da'dooda, labada jaceyl waxay isu arkaan inay ka badan yihiin lammaaneyaal ama kuwa jecelba - laakiin asxaabta ugu fiican. Waxay leeyihiin daryeel qoto dheer oo midba midka kale leeyahay iyo isxigxigasho, waa dad jecel masayr. Masayrkan ayaa mararka qaar sababi kara dagaallo khafiif ah oo u dhexeeya labada. Hadal ku filan !!... .. Hadda aan ku siino santuuqa!
Sida laga soo xigtay TheSun, Valverde mar wuxuu saaxiibkiis ka bilaabay dagaal fudud oo qalbi furan ka dib markii uu arkay iyada oo u soo dhigtay sawir gacmeed muuqaal ah oo muujinaya in badan oo ka mid ah xubnaha jirkeeda ee dareenka leh barta Instagram. Hadaladiisa ku aaddan booska waxaa ka qaaday boqolaal dad ah oo ka yimid dadweynaha daqiiqado kooban gudahood.
Sawirka sababay dagaalka fudud ee u dhexeeya Federico iyo saaxiibtiis- Mina Bonino. Sumcada Sawirka: TheSun
Ma ogeyd?… Gabadha 20-sano jirka ah ayaa kaftamay ka dib markii saaxiibtiis aysan kaxeynin dusha sare xitaa kadib markii ay seexatay habeenkii, iyada oo tilmaamaysa in ay maalin kasta ay xidhan tahay. Mina Bonino ayaa ka aargutay aargudashadeeda markii ay dib u eriday iyada oo ku andacootay in saaxiibkeed reer Uruguay ay sameeyaan wax joogto ah ku dhaq dharka hoostiisa. Ereyadeeda;
"Haa, waxaan door bidaa inaan haysto shaati isku mid ah MARKA MA AHAY INAAD SAMATADA isku isku meel wiig sidaad tahay."
Labada gacmeed ayaa taageerayaashu ka walwaleen xaaladda xiriirka ka dib isweydaarsiga ereyga ee qalbigooda fudud. Nasiib wanaagse, maalmo kadib, gabadha Fede ee Bonino waxay u cadeysay taageerayaasha inaysan jirin wax adag oo dhexmara iyaga. Tan waxaa la arkay markii ay dhejiso shaashad nafteeda oo leh cinwaan macaan oo ku saabsan jacaylka qoto dheer ee ay u qabaan midba midka kale.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Naftaada Shaqsiga
Inaad barto Federico Valverde Nolosha Shaqsiyadeed ee garoonka ka baxsan waxay kaa caawin doontaa inaad sawir buuxa ka hesho shakhsiyadiisa ka baxsan garoonka.
Bilaabidda, waa qof heysta xaalad gudaha ah oo madax-bannaan oo u sahasho horumar la taaban karo labadaba noloshiisa shaqsiyeed iyo xirfadeed. Federico mararka qaar waxay leedahay baahi qoto dheer oo ah inay keligeed waqti qaadato kana fogaato wax walba. Wuxuu doorbiday inuu joogo badiyaa badda dhexdeeda si uu naftiisa uga soo celiyo culeyska shaqada.
Fahmitaanka Federico Valverde Nolosha Shaqsiyadeed ee ka fog howlaha kubbadda cagta. Dhibcaha: IG
Sidoo kale noloshiisa shaqsiyeed, Fede waa qof qalbi qabow, oo bannaanka ka socda wax walba oo loo baahan yahay si looga fogaado isku dhac. Marka laga hadlayo arrimaha qalbigiisa jilicsan, doorashada Fede ee ah inuu helo gabar saaxiibo ah oo da 'ahaan ka weyn 5 isaga ka sareysa ayaa la cadeeyay. Isagu waa qof aan necebayn wada-hawlgallada qarsoon ama aan la isku halleyn karin oo doonaya inuu la joogo marwada qaan-gaarka ah oo fahansan howlihiisa adag ee maalinlaha ah ee kubbadda cagta.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Nolosha Qoyska
Hadafka lagu dejiyay gurigiisa hadda waa mid taariikhi ah. Fede oo hada ah nin ayaa u ilaaliyay xusuus ahaan inuu xasuusto qibradiisa noloshiisa hore ee ciyaarta. Maanta, waxay ku saabsan tahay ururinta shaqsiyadiisa iyo naadigiisa sharafta leh ee guriga qoyskiisa.
Federico Valverde ayaa lagu sawiray shaqsiyadiisa iyo hounours kooxdiisii ​​oo lagu keydiyay gurigiisa. Amaah: Marca
Waxbadan oo ku saabsan aabaha Federico Valverde: Waqtigaas, Julio aabihiis marwalba wuu shaqeyn jiray halka xaaskiisana ay ilaalin jireen shaqadooda wiilkooda. Maanta, aabaha weyn wuxuu ku faraxsan yahay in wiilkiisu noqday nin oo uusan ahayn nin dhalinyaro ah oo inta badan loo qaaday tababarka. Erayadiisa; “Bird-yarta ayaa noqotay Bird Weyn, oo ah markii ay dadka ka soo horjeedaa garaacaan, si sahlan u kacaan oo u socdaan”. In kasta oo uusan saameyn ku lahayn shaqadiisa sida xaaskiisa, Julio (sawirka hoose) waa aabe jecel kubada cagta oo jecel inuu kala hadlo waxyaabo ku saabsan kubada cagta wiilkiisa.
Valverde wuxuu si farxad leh ula qaatay waalidkiis - Aabihiis, Julio iyo Hooyo, Doris. Amaah: ovaciondigital
Inbadan oo ku saabsan Hooyada Federico Valverde: Waqtigii Federico uu u safray Yurub, hooyadiis ayaa kicisay doorkeedii hooyadeed iyada oo hubineysa in iyada iyo ninkeeda Julio ay ku raacaan Madrid. Dhammaantood waxay ku noolaayeen Madrid waxayna xaqiijisay inay Fede sii waddo ku raaxaysiga suugadeeda.
Doris wuxuu lahaa khibrad cajiib ah markii uu ku noolaa Madrid. Adigu si dhib yar ayey u aadeysaa Bernabau, halkii aad ka jeceshahay inaad wiilkeeda ka daawatid guriga telefishanka. Waxay ahayd waayo-aragnimo ka duwan markay tagto supermarket-ka ama suuqyada wax laga iibsado. Doris inta ay suuqa joogtay waxay maqli jirtay dadka ka faalloodaa wiilkeeda. Mar alla markay sheegto ereyada, dadku waxay jeclaan lahaayeen inay ogaadaan halka ay ka timid maxaa yeelay codkeedu wuu ka duwanaa. Markiiba waxay ku jawaabtay inay tahay Uruguayan, su’aasha xigta waxay noqon lahayd;
Miyaad tahay hooyada Fede Valverde?.
Xaaladda hadda jirta: Goor dambe, sidii Federico uu qaan gaadhay, waalidkiis waxay soo jeediyeen inuu ku laabto Montevideo. Waxay u oggolaadeen wiilkooda inuu sii wado khibradiisa Madrid iyo walaalkiis Diego. Markii uu ku noqday waddankoodii, Fede wuxuu waalidkiis u helay afar qol jiif oo laba qol ah. Aabihiis iyo hooyadiis waqtiga qorista waxay hada ku sugan yihiin Uruguay waxayna u yimaadaan inay booqdaan wiilkooda lixdii biloodba mar.
Inbadan oo ku saabsan walaalkiis Federico Valverde: Wax aad u yar ayaa laga ogyahay walaalkiis Federico kaasoo ku baxa magaca Deigo. In kasta oo laga fogaanayo dareenka dadweynaha, waxay noqon kartaa in Diego uusan qabin wax kale oo aan ahayn inuu ilaaliyo xirfadiisa walaalkiis yar.
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - nololeedka
Barashada qaab nololeedka Federico Valverde waxay kaa caawineysaa inaad fahanto heerka noloshiisa. Markay tahay lacag, Federico wuxuu leeyahay hibo uu ku ilaaliyo isku dheelitirka kharashka iyo kaydinta. Mushaharkiisa usbuuclaha ah ayaa ku filan oo keliya inuu u isticmaalo daryeelka qoyskiisa inta uu wado gaari wanaagsan. Sawirka hoose wuxuu soo koobaya qaab nololeedkiisa is-hoosaysiinta.
Federico Valverde Car- Waxaa lagu sawiray qof u eg Diego, walaalkiis ka weyn. Dhibcaha: Tumblr iyo Twitter
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Wuxuu mar dhibsaday dhibaatooyinka codka iyo neefsashada: Ilaa 2016, Federico Valverde wuxuu lahaa shaqo wanaagsan, ilaa uu ka bilaabay arrimaha neefsashada. Tan waxaa ku xigey isbadal kadis ah oo codkiisa ah oo sababay raaxo daro oo ku dhawaad ​​halis galisay mustaqbalkiisa.
Federico Valverde mar buu arrin ka dhex helay Lungs iyo Voice. Dhibcaha: Clevelandclinic, Wkipedia iyo Aidsmap
Federico wuxuu ku qaatay waqtiyadaas xiisaha leh dhakhaatiirta baarniinka jirka (khabiir ku takhasusay cilmiga iyo daaweynta xubnaha, badanaaba afka, cunaha, xargaha codka, iyo sambabbada). Waqti yar oo fasaxa ah ka dib, kubadsameeyaha ayaa ku soo laabatay mucjiso si uu xirfadiisa ciyaareed uga sii wato Real Madrid.
Naadigiisa Caruurta ah wuxuu helay $ 11,300 wareejinta uu ugu wareegay Madrid: The Ardayda Naadiga Midowday, halkaasoo Federico uu ka soo bilaabay shaqadiisa ilmaha waxaa la siiyay $ 11,300 sida degitaan ahaan loogu aado Real Madrid. Ma ogeyd?… Waxay ahayd lacagihii ugu qaalisanaa ee ay kooxdu soo iibsato taariikhdeeda. Lacagtan ayaa loo adeegsaday hagaajinta saqafka naadiga naadiga, tuubooyinka bullaacadda qaada, waxyaabaha la mariyo dufannada iyo waxyaabo kale.
Dooddiisa Kaliya: Federico kaliya hal khilaaf ayuu ka helay mustaqbalkiisa ilaa iyo haatan (wakhtiga qorista). Gudaha 2017 FIFA U-20 Koobka Adduunka Ciyaartii quarter-finalka ee ay la ciyaareen Portugal, ninka reer Uruguay ayaa soo bandhigay wajigiisa madaama uu farahiisa u adeegsaday inuu indhohiisa ku garaaco ka dib markii uu dhaliyay rigoore. Ficilkiisa waxaa loo tixgeliyey cunsurinimo. Waxaa dhaleeceeyay kumanaan kun oo taageerayaasha kubada cagta adduunka ah. Federico, markii la weydiiyay wax ku saabsan ficilkiisa, wuxuu sharxay in dabaaldegu uu u ahaa saaxiibkiis iyo wakiilkiisa oo ku socda magaca “el Chino" Saldavia.
Wuxuu mar dareemay xanuun sida Diego Maradona: Galabnimadii Maajo 19, 1978 ayaa leh taariikhdeeda. Sannadkaas, tababarihii hore ee xulka Argentina César Luis Menotti ayaa ka tagay Diego Armando Maradona (da 'da' 17) laga soo xushay xulkiisa Koobka Adduunka. A aad u xanaaq badan Diego aad buu u ooyay oo niyad jabkii ayaa beddelay.
Ma ogeyd?… Federico wuxuu ku dhacay isla aayaha markii loo tuuray Koobka Aduunka 2018 macalinkiisa Maestro Tabárez. Adigaa ahaa kaliya labo sano ka weyn xiddigga reer Argentine markaas (1978). Wuxuu ka bartay khibradda Maradona taas oo iyaduna sii xoojisay isaga. Waqtigii qorista, Fede wuxuu si buuxda uga mid noqday xulka qaranka oo ay ka hareen ilaa koobkii adduunka ee 3. Nasiib wanaag, wuxuu leeyahay mushahar usbuucle wanaagsan, mushahar sanadeed wanaagsan, iyo xaddiga lacageedka sii deynta 750 milyan euro.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhrinta sheekadeenna carruurnimada ee Federico Valverde oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh nololeedka Untold. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.